janvier 2016 – filazantsaramada
« Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko, izay holazainy amin’ny anarako, dia Izaho no hitsara azy. » Deotornomia 18:19/span> Jehovah Andriamanitra no miteny amin’ny firenena izay nofidiny ho Azy, ka mpaminany avy eo aminy no atsangan’Andriamanitra, ary atsangany hitondra ny hafatra avy Aminy, dia hoy Izy hoe ataoko ao am-bavany ny teniko, ary holazainy aminy izay […]
Publié parfilazantsaramada janvier 29, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAHAIZANA MIHAINO!
Ny Sabotsy 23 Janoary 2016 no nanatanteraka ny fiarahabàna nahatratrarana ny taona vaovao 2016 ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” avy amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Zava-dehibe ny fihaonana toy izao satria dia fotoana natao indrindra hitondràna am-bavaka ny taona vaovao sy ny asa Fitoriana ifandrombonan’ny roa tonta, ary fisaorana sy […]
Publié parfilazantsaramada janvier 29, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fihaonan’ny Mpiara-miasa antsitrapo
« Ary ny finoana dia fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. » Hebeo 11:1 Ny finoana resahina eto dia ny finoana an’i Jehovah Andiamanitra, finoana nanan’i Abela izay nanatitra fanatitra tsara ho an’Andriamanitra! Dia toy izany koa ny finoana nanan’i Noa; ka nanamboatra sambo-fiara araka ny toro-hevitra avy amin’Andriamanitra na dia eny an-tampontanety […]
Publié parfilazantsaramada janvier 22, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FINOANA!
Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara? Ny lohahevitra hoe: “Ahoana no hampahomby bebe kokoa ny Fitoriana ny Filazantsara” no horesahana amin’ny fandaharana “Henoy ny feony” mandritra ity volana Janoary izay fiatombohan’ny taona 2016 ity. Mifanandrify indrindra amin’ny fikendren’ny Feon’ny Filazantsara (FF) io lohahevitra io ka nandray anjara mivantana tamin’ny famelabelarana ny Talen’ny […]
Publié parfilazantsaramada janvier 21, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharana amin’ny fampielezam-peo: « Henoy ny Feony »
«Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan’Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia hianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona.» (Jaona 4:10) Io tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona 4:10 io indray no entintsika milomano ao anatin’ny Jaona 4:1-26 manontolo. Dia hitantsika ao, araka izany tokoa fa resaka rano […]
Publié parfilazantsaramada janvier 18, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ILAY TENA RANO VELONA
Mitaiza sy mampiorina ny Finoana an’i Jesosy Kristy Tompo Misy hatrany ireo olona izay mandalo eto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara (FF) na ireo mpianatra mandalina ny Soratra Masina amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) no liana amin’ny famakiana ireo Boky Literatiora Kristiana. Ny fikendren’ny FF amin’ny famokarana sy fampielezana ireo boky ireo moa dia […]
Publié parfilazantsaramada janvier 13, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Literatiora Kristiana
TSY MAHELA NY TENY FIKASANY!
« Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra. » (II Pet 3:9) Amin’izao taona vaovao izao indray dia tsaroana fa nitombo ny taona efa niainana. Ka amin’ny maha tany fandalovana ho antsika olombelona, […]
Publié parfilazantsaramada janvier 8, 2016 janvier 8, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TSY MAHELA NY TENY FIKASANY!
Famoahana ireo mpianatra andiany voalohany ao amin’ny Sekoly ambony ISPPS Anisan’ny mpiara-miasa amin’ny Sekoly Ambony Institut Supérieur des Paramédicaux et Promotion de la Santé (ISPPS) ny Feon’ny Filazantsara (FF) nanomboka ny taona 2014. Eo amin’ny fampandrosoana ny lafiny aram-panahy moa no ifandrombonan’ny roa tonta, ka fiaraha-miasa amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FMSI) na ny […]
Publié parfilazantsaramada janvier 7, 2016 janvier 7, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.